Mamo izy io ary nitifitra olona fahatany. Tovolahy mpifanolo-bodirindrina aminy ihany no notifiriny in-telo misesy tamin’ny basy PA 9mm teny aminy fa mitabataba, hono, ny moto nentiny. Soa fa nahay niala ity farany ary nitsoaka. Nitory avy hatrany ary nampandre ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria (SEG) ny rain’ilay niharam-boina. Nitsoaka tao Toliara ilay manamboninahitra taorian’ity tranga ity, rehefa nisava ny toakany, raha ny vaovao vonjimaika azo. Nilaza ny SEG Jeneraly Ravalomanana « fa mialoha ny fanaziana ny zandary dia tsy maintsy misy fanadihadiana sy famotorana ifotony fa tsy hoe izay mitaraina dia hahazo rariny sy hitsiny manoloana ny andinim-pitsipika fifehezana sy ny fehezan-dalàna famaizana», araka ny hita eo amin’ny pejin’ny tambajotran-tseraseran’izy ireo. Miezaka hanadio ny ao anatiny tanteraka izy ireo. Ny fianakavian’ny nampihorohoroana ihany koa milaza fa hijoro amin’ny marina hatrany.